သိန္း 100 မွ သိန္း 300 ထိ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10110991 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဝေဠုဝန် (၇)လမ်းတွင် (၁၈x၃၃) (၅)လွှာတိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9817315 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9771253 အတွက် Yangon Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9756136 အတွက် Yangon Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9721829 အတွက် Yangon Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9721621 အတွက် Yangon Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9694635 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9682153 အတွက် Yangon Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗဟိုလမ်းအနီးတွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9630552 အတွက် TPL Myanmar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်